“Strenght na finesse”
Ọ na-agwakọta amara na ike, ọ na-ejikọ ike na finesse yana àgwà ndị a niile, otu ejikọtara ọnụ, mejupụtara ụzọ dị mma nke mmesapụ aka na omume ọma zuru oke.
Mgbagwoju anya, nke aghụghọ na nke ekwuputara na nke a, mpaghara nke Gevrey-Chambertin so na ndị a kacha mara na Burgundy. Ihe kpatara ya di mfe. Nnukwu ebe ahụ, nke na-erughị ala hectare 450, na-enye ala dị iche iche pụrụ iche nke na-adịghị ahụkebe nke sitere na Lias clays na mkpọda ahụ na gralky gravel. Site na ala ndị a mmanya nwere square gburugburu!
Ka anyị nyochaa ebe ndị a ọnụ, ndị mbụ jiri ịhụnanya họrọ, mejupụtara obodo Gevrey-Chambertin. Ka anyị burugodị ụzọ mee nke mbụ. Na Dérée, otu nnukwu ala, nke dị n'etiti etiti na ntụziaka nke obere obodo Brochon, nke ekpughere nke ọma na nke ọma, ọ mejupụtara Gevrey dị ike. Aha ya nwere ike ịbụ “ọzara” na oge Gaulish ma ọ bụ ala dara ala nke na-enweghị mmasị na ịkọ ihe n'ihi nsogbu ọ na-adị n'ịrụ ya.
Ugbo ala a maara dị ka Champérrier, agbata obi nke mbụ, na-enye anyị mmanya na-eme ka ndị mmadụ na-eju anya na njupụta ha na ụdị ha. Ọ bụ osisi vaịn Gevrey kacha ochie, nke Pierre Arthur Trapet kụrụ na 1919.
Ka anyị bịaruo nso ụlọ ochie ahụ na etiti Gevrey, ebe Clos de Combe dị. Gburugburu mgbidi mara mma nke akọrọ, na-enye anyị mmanya ndị siri ike, ndị nwere agba nwere ume ma dị ụtọ. Okwu ahụ bụ "Combe" na-ezo aka n'ebe a ebe enyere enyemaka ahụ aka ma fụchie.
Na ntuziaka nke Great Vintages, Petite Jouise na-egosi ọmarịcha ”ahịrị-mma” nke ihe karịrị afọ iri ise. Aha ya na-ekpughe ịdị adị nke ndị na-achọ ihe ọjọọ na Middle Ages. N'ebe a ka a na-eme ikpe ziri ezi. Vintage a enweela ihe ndozi osisi ya, ugbu a dochie anya osisi ndị na-akwado osisi vaịn nke ezigbo mma.
Ka anyị kwụsị njem anyị site na ebe a na-akpọ Vigne Belle: ebe osisi vaịn mara mma ma nwee ọganihu.
Ihe na-adịgide adịgide nke onye na-eme mmanya. Osisi vaịn mara mma nke nwere obere ahịhịa na-eme ka mmiri nke ala anyị nwee nghọta.
2 ha 50 ares, 4 ngwugwu, la plus vieille plantée en 1913
3 ha, ngwugwu 8